spanned ပြုပြင်နည်း zip ဖိုင် - DataNumen
spanned ၏အတွင်းပိုင်းဒေတာနှင့်အဆောက်အ ဦ များ Zip ဖိုင်များအုပ်စုခွဲ၏သူတို့အားတူညီကြသည် Zip ဖိုင်များ။ ၎င်းတို့အကြားတစ်ခုတည်းသောကွဲပြားခြားနားမှုမှာဖိုင်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
အုပ်စုခွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ Zip ဖိုင်တွင်ကွဲပြားသော extension (ဥပမာ - mysplit.z01 ',' mysplit.z02 'စသည်ဖြင့်) နှင့်' mysplit ။zip'' နောက်ဆုံးအပိုင်းအဘို့) ။ spanned အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုနေစဉ် Zip ဖိုင်တူတူ (ဥပမာ - 'myspan') ရှိသည်။zip') ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ spanned ပြုပြင်ရန်နည်းလမ်း Zip ဖိုင်များသည်အုပ်စုခွဲခြင်းနှင့်ဆင်တူသည် Zip ဖိုင်များ (သင်၏ span ဖိုင်အမည်ကို 'myspan' ဟုယူဆပါ။zip'), အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
1. တစ်ခု tempo တစ်ခုဖန်တီးပါrarသင်၏ hard drive ထဲရှိ y ဖိုင်တွဲသည် C: \_ TempFolder \_ t
2. Myspan ကိုကူးပါ။zip ပထမ zip disk သို့ C: \_ TempFolder \_ myspan.z01 ဟုအမည်ပြောင်းပါ
3. Myspan ကိုကူးပါ။zip ဒုတိယပေါ်မှာ zip disk သို့ C: \_ TempFolder \_ myspan.z02 ဟုအမည်ပြောင်းပါ
4. myspan သည်အထိအဆင့်3ကိုပြန်လုပ်ပါ။zip အားလုံးအပေါ် zip disk များကို C: \_ TempFolder \_ သို့ကူးယူပြီး ၄ င်းတို့၏အမိန့်အရပြန်လည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Myspan ကိုသတိပြုပါ။zip နောက်ဆုံးအပေါ် zip disk ကိုအမည်ပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
5. ယင်းကိုလိုက်နာပါ တစ်အုပ်စုခွဲပြုပြင်အတွက်ညွှန်ကြားချက် zip ဖိုင် အဆိုပါ spanned ပြုပြင်ရန် Zip ဖိုင်။
ပူးပေါင်း, လုံးပတ် zip ဖိုင်, ကှဲပွားစေ, zip ဖိုင်